Cuntada: Sida loo sameeyo Isticmaalka Wanaagsan ee Isticmaalka Isticmaalka Macadka Markaad Joogtid
Inkasta oo isku-xirka xogta sicir-xawaaraha ah ay u muuqdaan in ay meel walba joogaan, weli waxaa jira meelo aan xirnayn xitaa da'da this. Meelaha qaarkood waxay leeyihiin nambar iskuxiran, markaa waa inaad la shaqeysaa xawaaraha qadarka ah ee aad u hooseeysid meelaha qaarkood. Tusaale fiican ayaa ah markaad safar gasho ama markaad dibedda ku jirto - fotos de famosas com oculos ray ban.
Labada xaaladoodba, waxaa laga yaabaa inaad doonayso inaad kaydiso bogag badan oo internetka ah si aad u akhri kartid wixii ka dambeeya markii telefoonkaagu uu noqdo mid degan. Ivan Konovalov, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamiisha Maamulaha Guusha Macaamiisha, ayaa sheegaya in ay jiraan barnaamijyo Wikipedia ah oo loogu talagalay Android iyo macruufka kuwaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay kaydiyaan maqaallo lagu heli karo goor dambe marka ay dhacaan.
Ho inaad kaydiso bogga Android
Ku dheji dhibcaha saddexda geesood ee dhinaca geeska midig ee shaashadda. Tani waxay u adeegtaa sida badhanka menu
Dooro "Save the page" liiska xulashooyinka soo baxaya.
Sida loo helo qoraallada lagu badbaadiyay Android
Ku tag liiska muhiimka ah oo dooro "Bogagga kaydsan"
Sida loo kaydiyo bogga ku yaala
Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad gasho icon wadnaha hoose ee maqaalkana waa la badbaadiyaa. Tani way fududahay oo gaaban tahay.
Sida loo helo maqaallada ku qoran boggaan iOS
Labada nooc oo app ah ayaa kuu oggolaanaya inaad cusboonaysiiso maqaalka leh mowduucda ugu dambeysay marka aad isku xirnaantaada soo celisay, Si kastaba ha ahaatee, version Android wuxuu leeyahay faa'iido kale oo ku saabsan version app ee app ah Isticmaalayaasha si ay u raadiyaan boggaga cached
Xitaa haddii aad leedahay isku xirnaan, waxaa jira dhowr sababood oo aad weli doorbidayso akhrinta maqaallada lagu kaydiyay habka offline. Way ka madax bannaantahay dhammaan noocyada kala duwanaashaha. Markaad ubaahan tahay feejignaan aad u sarreeya, ogeysiisyada sida soo socota SMS-soo-socda, wicitaanada, farriinta Twitter, iyo kuwa kale ayaa si xun kugula mashquulin kara, hoos u dhigista diiradaada, iyo in aad gaabisid jadwalkaaga akhriska. Sabab kale ayaa ah in cusbooneysiinta bogga ay ku qoran tahay waxyaalaha ugu muhiimsan. Tani waxay ka dhigan tahay in aad ka maqnaan karto macluumaadka muhiimka ah ee bogga badbaadiyey.
Wikipedia waxaa laga yaabaa in loo sameeyay qaab hawleed. Sidaa darteed, ku xiran inta uu safarkaagu qaadanayo iyo sida ugu dhakhsaha badan ee aad u akhristo, waxaad kaydin kartaa bogag ku filan oo kaa sii wadi doona inaad ku mashquuliso dhamaan safarkaaga haddii aad tahay qof wax aqrinaya.
Inaad xitaa xayeysiiso sidoo kale waxay ilaalisaa bateriga qalabkaaga. Taas macnaheedu waa waxaad akhrin kartaa waxyaabo kale ka hor inta aanad batteriga ku deynin habka offline marka loo eego qaabka internetka. Xitaa ardaydu waxay ka faa'iideysan karaan bogagga shabakadda ee shabakadaha ah
Arday ahaan, waxaad samayn kartaa cilmi-baaris ku saabsan Wikipedia oo aad ku kaydin karto dhammaan bogagga ku habboon. Haddii aad haysato isku-xirnaanta ama aan ahayn, waxaa wanaagsan inaad beddesho qalabkaaga si aad uhesho habka is-qabsiga sida boqolkiiba 100 diirada loo baahan yahay si loo akhriyo loona dhajiyo dhammaan bogagga badbaadiyey. Waxa kale oo laga yaabaa inaad u baahatid in aad ka feejignaato qodobbada muhiimka ah markaad akhriso bogagga. Nasiib darro, dad badan ayaanay ka warqabin muuqaalkan app ee wicitaanku wali.